UVICTRIX USUNGULA ISILAWULI SE-XBOX ESIKUMGANGATHO OPHEZULU KUNYE NE-HEADSET ENGENAZINGCINGO - OKUNYE
UVictrix usungula isilawuli se-Xbox esilite-style kunye ne-headset ye-PS5 engenazingcingo
Umgca omtsha weGambit weempawu zeDual Core Tournament Controller kunye ne-headset eyenzelwe i-PlayStation 5
UVictrix wakhela igama lakhe kukhuphiswano. Yalo ukulwa iintonga kwaye ii-headsets benze i-splash kumgangatho wabo obalaseleyo wokwakha kunye nokuchukumisa okutsha. Iiperipherals zinexabiso kodwa iimpawu kunye nomphetho wokukhuphisana zithethelela ixabiso.
Ngoku uphawu lujika izinto zalo kumlawuli we-Xbox kunye ne-PlayStation 5 ye-headset ye-headset yentengiso kunye nochungechunge lwayo lwe-Gambit, olusungulwa namhlanje. UMlawuli wayo weVictrix Gambit Dual Core Tournament ujolise kubadlali bokudubula bomntu wokuqala kunye nabo basebenzisa iipads kwimidlalo yokulwa. Ngeli xesha, i-headset yayo engenazingcingo ixhasa iintlobo ezahlukeneyo zesandi esijikelezileyo kubandakanya iDolby Atmos kwii-Xbox consoles kunye neePC kunye ne3D Audio kwiPlayStation 5.
Eyona nto ichukumisayo kwezi zimbini sisilawuli seGambit, leyo inkampani engumzali, iiMveliso eziYilwayo zokuSebenza, ithi ngoyena mlawuli ukhawulezayo kwihlabathi kwi-Xbox. Isixhobo sihambisa loo ngxelo ngesixhobo esinokusabela ngokucacileyo. Inika ikhredithi idizayini engundoqo emibini ephucula i-latency ngokunikezela enye yeenkqubo zayo ekuqhubeni igalelo kunye nenye isandi.
I-Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller iquka i-14 yecandelo elitshintshiweyo kunye necala elithwele. Lininzi ixabiso lexabiso. (IiMveliso eziYilwayo zokuSebenza)
KHAWULEZA UKUYA EPHANSI
Umphathi wemveliso okhokelayo u-Ali Homayounfar uthe inkqubo ekhawulezayo ngumahluko phakathi kokuphumelela umdlalo nokuphulukana nomdlalo omnye. Ubonise umfanekiso weskrini womdlalo ngexesha leCapcom Pro Tour. Wayephambili kumdlalo, kodwa umfanekiso ubonise ukuba nangona uHomayounfar kunye nomchasi wakhe bobabini becofa amaqhosha abo ngaxeshanye. Ngethamsanqa kuye, i-punch yakhe eyoyikisayo yadlula kuqala ngenxa ye-latency engcono kwitekhnoloji yeVictrix.
U-Navin Kumar, igosa eliyintloko lentengiso ye-PDP, uthe ukuhlukana kwe-millisecond ukubhalisa igalelo ngumahluko phakathi kokuphumelela kunye nokulahlekelwa. Ingcaciso ibuchwephesha kancinci kodwa uKumar uthe ukubambezeleka kwezixhobo kuphantsi kangangokuba ikhonsoli ithatha amagalelo ngokukhawuleza xa ivotela imiyalelo. Ndandiziva ukuba ubuntununtunu kwisilawuli seVictrix. Akukho lag ibonakalayo xa nditshekelisa iintonga ze-analog okanye ndicofa amaqhosha.
Oko kuyo kwaye ngokwayo kuya kuphawuleka, kodwa i-PDP yaya phambili ngokunika umlawuli we-Gambit izixhobo ezitshintshiweyo ze-14, i-trigger ehlengahlengiswayo yokumisa, i-paddles yangasemva kunye ne-case yokuthwala. Yiphakheji epheleleyo eneziqwenga ezisebenzayo ezinempembelelo kumava okudlala.
Thatha i-faceplate umzekelo. Umlawuli weGambit uza nezimbini. Iplastiki eqhelekileyo emhlophe ebambayo kunye nesilicon emfusa egudileyo. Ezi zimbini zifota kwisixhobo ngemagnethi kwaye zibanike imvakalelo eyahlukileyo. Iplastiki eqinile inezithintelo ezingcono, eziluncedo ukuba iintende zezandla zomdlali ziba nokubila. Ngeli xesha, isilicon ivakala imtyibilizi ngakumbi kodwa iphinda ithobe isandi kwiintonga ze-analog kwaye iyinike ukuhamba ngokulula.
Umlawuli we-Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller ubonisa iipaddles zangasemva kunye nezinto ezibangela uhlengahlengiso. (IiMveliso eziYilwayo zokuSebenza)
Ibonisa iipaddles ezinokuthi zitshintshwe ukuze zisebenze njengamaqhosha amabini okanye amane. Amasango kwiintonga anokutshintshwa kwiisetyhula eziqhelekileyo okanye i-hexagonal ukuba abakhuphisana bayisebenzisela imidlalo yokulwa. Nokuba iintonga ze-analog zinokucinywa. I-PDP ibonakalisa ixesha elide kubadubuli kunye ne-convex enye yezinye iimeko. Okokugqibela, i-D-pad inokutshintshelwa ipateni eqhelekileyo yomnqamlezo okanye icwecwe elingcono kwimidlalo yokulwa.
Umlawuli weGambit ude athwale neembono ezivela kwabanye abalawuli be-Elite-style njenge-Astro C40. Ineplagi ehlaziyiweyo ye-USB-C ukuze isilawuli esinentambo singakhutshelwanga kwiimeko ezinzima, apho abadlali banokuhambisa isilawuli sabo ngeenxa zonke.
Eyona nto imangalisayo malunga noMlawuli weGambit lixabiso. Yinto $99.99. Oko kuyenza ibe ngaphezulu kwexabiso xa kuthelekiswa ne-169 SCUF Instinct kunye neRazer Wolverine yeedola ezili-149. Bendisoloko ndibeka isixhobo kwisantya saso kwaye enye into endikhathazayo kukuqina kuba iGambit ivakala ilula. Kuya kuba mnandi ukubona ukuba umlawuli ubamba njani ngaphezulu kwamakhulu eeyure zokudlala.
I-headset ye-Victrix Gambit inokusebenza kwezinye ii-consoles ngentambo ye-3.5mm kodwa iyona nto ingcono kwi-PS5 ngoqhagamshelwano olungenacingo. (IiMveliso eziYilwayo zokuSebenza)
I-Victrix Gambit Wireless Headset nayo ineziqinisekiso zayo ezinomtsalane. Kuthatha izinto ezininzi zoyilo ezivela kwiVictrix Pro AF Headset kwaye ibadibanise kwiphakheji efikelelekayo. Ubukhulu becala yenzelwe ukuba isetyenziselwe i-PlayStation 5 kwaye idibanisa nge-dongle ye-USB, kodwa iza nentambo ye-3.5mm eyenza ihambelane nezinye ii-consoles.
Uyilo lundikhumbuza kancinci nge-Astro A40s kodwa ngenkangeleko engqukuva. Ilula ngokufanelekileyo kwi-301 grams kwaye ine-plush cushioning kwiikomityi zendlebe. Konke oku kuthetha ukuba i-headset ye-Gambit Wireless iya kukhululeka kumdlalo wexesha elide. Ngelishwa, andizange ndibe nexesha elininzi kunye nesixhobo, kodwa ukusuka kwimibono yam yokuqala, umgangatho wesandi ungcono kakhulu xa uqhagamshelwe ngaphandle kwamacingo xa kuthelekiswa ne-3.5mm jack. Oku kuvakala ngathi iseti yentloko yePS5 ngapha nangapha.
Inezinye izinto ezimbalwa ezongezelelweyo ezifana ne-mic-flip-to-mute kunye neqhosha lokutshintshela kwiimo ezahlukeneyo. Okubangel 'umdla kukuba, i-headset ye-Gambit ixabisa i-$ 129.99, eyenza ukuba ibize kakhulu kunomlawuli weqabane layo. Ikwayibeka kwindawo enzima kwimarike ye-headset yokudlala exineneyo.